सायद छैन हरेक पाठक तुरुन्तै के छलफल गरिनेछ बुझ्न हुनेछ। वास्तवमा, हामी सबै भन्दा कम्तिमा जीवनमा एक पटक अनुभव गरेका छन्, बरु रोग संग एक बच्चाको रूपमा तर। परजीवी pinworms - एक detachment roundworms nematodes। बस आंतों कीडे को एक प्रजाति राख्नु। यी कीडे रोग Enterobiasis कारण। मानिसहरू pinworm संक्रमण "फोहोर हात को रोग" भनिन्छ। केही मानिसहरू यो एक शिशु रोग छ भन्ने विश्वास गर्छन्। वास्तवमा संक्रमण pinworms - वयस्क जनसंख्या बीचमा धेरै साझा घटना।
Pinworm - यो हुनुहुन्छ?
Pinworm, वा Enterobius vermicularis, एक लम्बाइ 10 मिमी (महिला) पुग्छ र एक चुच्चा पुच्छर, लामो पुरुष आधा, को भुँडी एक मुड अन्त संग छ। कीडे तिनीहरूले आंतों पर्खाल गर्न आफूलाई संलग्न जो संग मुख, वरिपरि एक विशेष शरीर छ। मानिसहरूलाई मा विशेष Parasitize। होस्ट बाहिर शरीर महिना केही घण्टा देखि हुन सक्छ। बिरालोहरु र कुकुर पनि tapeworm अन्डा को वाहक हो।
कुनै पनि मानिसलाई संक्रमित विषय। तर विशेष गरी Kindergartens उपस्थित अधिकांश310 वर्ष देखि बिरामी बच्चाहरु enterobiasis कि उल्लेख गरे। यो व्यक्तिगत स्वच्छता बच्चाहरु यो उमेर र अन्य बच्चाहरु संग बारम्बार सम्पर्क को नियम अनुपालनको कमी को कारण हुन्छ। रूपमा परजीवी सूर्यका द्वारा हत्या गर्दै कम अक्सर, तातो जलवायु संग देशहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई मा pinworms पाउन। के pinworms उपचार धपाउने प्रयोग? सरकारी चिकित्सा जस्तै, र परम्परागत अभ्यासहरू को औषध रोग मुकाबला प्रभावकारी छन्।
तिनीहरूले कीडे जस्तो? फोटो पुरुष pinworms तपाईं अनुहार मा शत्रु थाहा मद्दत गर्नेछ।
जीवन चक्र pinworms
मानव शरीर मा भएपछि, कृमि अन्डा सानो आन्द्रा मा सारियो छ। त्यसपछि लार्वा, को श्लेम लाग्एको झिल्ली हानिकारक भएको आन्द्रा गर्न आफूलाई संलग्न जो मा प्वाल र सामग्रीहरू खान्छन्।2हप्ता भित्र यौवन अवस्था परजीवी र थप मल महिलाहरुको हुन्छ। एक महिला pinworms मरिरहेका गर्दा गुदा नै बाहिरी Folds मा मलाशय र बिछाउने अन्डा मा तल वहन 5,000 15,000 अन्डा। Pinworm जीवन चक्र एक महिना लिन्छ। अन्डा परिपक्वता प्रक्रिया अप6घण्टा अनुकूल अवस्थामा।
रोग सजिलै pinworms को बाह्य वातावरण संग सम्पर्क माध्यम फैलाउन छ। गुदा को सतह मा लार्वा प्वाल। त्यसैले तिनीहरू, तल र ओछ्यान तन्ना, तौलिया गर्न प्राप्त तत्काल वातावरण मानव संक्रमण पैदा, सजिलै फैलियो। गुदा को सतह - साथै, जीवन pinworms को लक्षण manifestations संक्रमण को क्षेत्र मा तीव्र खुजली छ। को चिलाउनु scratching शान्त, एक व्यक्तिले आफ्नो हात र आफ्नो नङ अन्तर्गत अन्डा राख्दछ, र केवल एक वाहक तर पनि रोग को वितरक छ। मानव वा samoinfitsirovaniya को-संक्रमण पुन गर्न फोहोर हात मार्फत कारण pinworms विकास चक्र को सम्भव पुनरावृत्ति। संक्रमण सबै भिन्न आफ्नो हात मा, र त्यसपछि मुख मा pinworm अन्डा हुन्छ भन्ने तथ्यलाई कम छन्। संक्रमण कसरी व्यवहार गर्न - तल हामी वर्णन।
Enterobiasis पूर्ण asymptomatic पास हुनसक्छ। तर प्राय रोग गुदा क्षेत्रमा खुजली सँगसँगै छ। महिला अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग जब बेचैनी राति विस्तारित। खुजली3दिन सम्म बिरामी चिन्तित, त्यसपछि दुखाइ गायब। तर2हप्ता पछि यो देखा पर्छ। यो पुन संक्रमण को घटना र pinworms नयाँ चक्र द्वारा बताए छ। combing गर्दा एक जीवाणु संक्रमण र भडकाऊ प्रक्रिया को विकास सामेल को संभावना छ। रोग को दीर्घकालीन पाठ्यक्रम वा कीडे को एक ठूलो संख्या संग आंतों disturbances खकार र colicky दुखाइ संग बारम्बार मल को रूप मा आउँदैन। कीडे कचरे माइग्रेन, सुत्न विकार, थकान, वाकवाकी, चक्कर आना, एलर्जी प्रतिक्रिया को उपस्थिति योगदान। छोराछोरीको ढिलो वजन र समग्र विकास परिणामस्वरूप, आंत्र microflora विचलित।
केही अवस्थामा, pinworms जटिलताहरू enterobiosis प्रवाह को एक किसिम को कारण आन्तरिक अङ्गहरू मा सार्न सक्छ। यहाँ केही सामान्य उदाहरण हुन्।
Appendicitis: मा कृमि को इन्जेशन कारण पनि cecum।
Peritonitis: pinworm को पेट गुहा मा penetrates गर्दा विकास।
बालिका को जनन मा कीडे सार्दा को मामला मा vulvaginit र मूत्र संक्रमण विकास।
विकास enterocolitis pinworms को दीर्घकालीन वाहक संग।
को कृमि को eyeball थियो भने, फोक्सोमा, नाक पदहरू सर्जरी को परजीवी हटाउन आवश्यक हुनेछ।
निदान "Enterobiasis" परिश्रम संक्रामक रोग लागि सामान्यतया छ। pinworms को खोज को लागि यस्तो निदान विधिहरू प्रयोग:
Enterobiasis वा pinworm विश्लेषण मा Scraping धेरै तरिकामा बाहिर। पहिलो मामला मा, डाक्टर टेप सामाग्री गुदा क्षेत्रमा सङ्कलन। कि पछि एक गिलास स्लाइड टेप चल्दछ। अन्यथा तपाईं संक्रमण मा Folds साथ यो चित्रकला, एक कपास swab संग विश्लेषण लागि सामाग्री लाग्न सक्छ। एक तंग ढक्कन संग एक जार मा फेरि एक छडी राखे। यसरी, भौतिक को संग्रह घर मा बाहिर गर्न सकिन्छ। यस मामला मा यो प्रयोगशाला मा सामाग्री प्रदान गर्न छोटो अवधि मा आवश्यक छ। आवश्यक भएमा, यो 8 घण्टा फ्रिज मा कस बन्द जार भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर विश्लेषण को परिणाम को शुद्धता कम हुनेछ।
पहिचान को कीडे को चिकित्सकको परीक्षा हुन सक्छन्। डाक्टर scratching वा छाला सतह मा कृमि को खुजली को निशान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
Enterobiasis थप पुष्टि आदर्श अधिक eosinophils रगत गणना मा उपस्थिति छ।
कीडे को आन्द्रा मा अन्डा रूपमा अदक्ष pinworms पहिचान गर्न मल विश्लेषण।
को scrapings को सुविधाहरू
विश्लेषण बिहान बाहिर गर्नुपर्छ। यो सौंपन सामाग्री defecation नगर्न गर्न मनमोहक छ। तपाईं गुदा को सतह देखि अन्डा बन्द धुन सकिन्छ, टाढा कुनै लुगा धुने हुनुपर्छ।
सामान्यतया परीक्षण परिणाम एक दिन तयार छ। निम्नानुसार Pinworms परिभाषित: अन्डा संकलन सामाग्री पत्ता छ लागि प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप विचार। यस्तो अभाव, तर अतिरिक्त Enterobiasis लक्षण को उपलब्धता, यो उचित हो-जाँच्न एक पछि दिन गर्न, कृमि हरेक दिन अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग रूपमा छ।
सकारात्मक परिणाम संग, डाक्टर तुरून्त पूरा गर्न सिफारिस को sanitization परिसर, जहाँ रोगी; संक्रमित उजागर र रोग को उपचार सुरु गर्न सिफारिस गरिएको enterobiosis व्यक्ति खुर्केर सफा गर्नु गर्न निर्देशन दिने। pinworms बच्चाहरु को लागि एक उपचार एक बाल विशेषज्ञ नियुक्त।
Pinworms: उपचार, दबाइहरु
Pinworms फेला! कसरी व्यवहार गर्ने? पहिलो चरण pinworms आफैलाई छुटकारा प्रयास छ। घरमा, यो स्वच्छता र सरसफाई को सरल नियमहरू लागि आदर गर्न सकिन्छ:
प्राय अंडरवियर परिवर्तन;
राम्ररी हात धुन;
फलाम लाँड्री लाउने अघि दुवै पक्षले इस्त्री;
खाट सनी र तौलिया परिवर्तन गर्न दैनिक राउन्ड;
अधिकतम तापक्रम सबै कुराहरू pstirat;
छोटकरीमा नङ काटेर;
को अन्डा वाहक बस जनावर हो अक्सर छ रूपमा, पाल्तु जनावर हेरचाह, आफ्नो स्वास्थ्य अनुगमन;
साबुन र पानी कोठा संग राम्ररी धुनुहोस्, जोश सबै तपाईं कि। Disinfectants pinworms मार्न छैन। गलैँचा, खिलौने, गद्दे, यो सूर्य केही घण्टा बनाउन मनमोहक छ - यूवी प्रकाश कीडे लागि हानिकारक छ। सबै आवश्यकता धुन - छत, को पर्दे, झूमर फेला pinworm अन्डा, तिनीहरूले हावा मा उड। पुन संक्रमण अन्यथा सम्भावना यसलाई फाल्नु हुनेछ, - र धुन गर्न सक्षम हुने छैन।
enterobiosis pinworms दबाइहरु सल्लाह दिन्छन् वयस्क को उपचार को लागि संक्रामक रोग र परजीवीविज्ञान। यी औषधिहरू helminth जीवन चक्र उल्लङ्घन:
"Piperazine adipate", "Piperazine" ट्याब्लेट फारम मा कीडे मा एक paralyzing प्रभाव छ।
"Kombatrin" मद्दत गर्छ प्राप्त pinworms छुटकारा। "Pyrantel" एउटै संरचना छ र व्यापक रूप बाल व्यवहार मा प्रयोग गरिन्छ। ट्याब्लेट र निलंबन रूपमा उपलब्ध छैन। कीडे को ब्लक र शरीर तिनीहरूलाई हटाउँदछ।
"Pirvinium" pinworms को चयापचय उल्लङ्घन गर्छ। "Pirkon" "Pirviniuma" को एक एनालग छ।
"Vermoxum", "Vermakar" "Vero Mebandazon", "Vormin", "Mebeks mebendazole" अन्तर्राष्ट्रिय नाम ""। कीडे को चयापचय उल्लङ्घन गर्छ।
"Dekaris", पाटी helminths को रूप मा "Albendazon" मांसपेशी काम लाइ रोक्छ।
"Medamin" को आन्द्रा गर्न कृमि छडी को क्षमता impedes।
औषधि pinworm, उपचार द्वारा को पाठ्यक्रम अवधि, लागूपदार्थ मात्र रोग, उमेर र चिकित्सा इतिहासको दृश्यमा चिकित्सक निर्धारित गर्न सकिन्छ। अक्सर, त्यहाँ एक हप्ता को एक अन्तराल संग थप उपचार लागि आवश्यक छ। किनभने यो छ anthelmintic लागूपदार्थ मात्र वयस्क कार्य र लार्वा र अन्डा कुनै प्रभाव छ। सबै संक्रमित, मान्छे संग सम्पर्क हुन निदान परीक्षण।
गर्भावस्था र lactation समयमा Enterobiasis उपचार
Enterobiasis - गर्भवती महिला बीच एक साधारण घटना। अक्सर, संक्रमण गर्ने बच्चाहरु को समूह को कीडे ल्याए पुरानो बच्चा आउँछ। बच्चालाई pinworms को intrauterine विकास गर्न खतरा प्रतिनिधित्व छैन, तर वितरण समयमा यो संभावना संक्रमित नवजात छ।
lactation को अवधिमा र प्रारम्भिक गर्भावस्था (सप्ताह 12 अघि) contraindicated छ anthelmintic लागूपदार्थ प्राप्त बेला दबाइ मा निहित पदार्थ बच्चालाई गर्न irreparable हानि हुन सक्छ किनभने। बिल्कुल आवश्यक छ, को कीडे उपचार समयमा स्तनपान अवरोध गर्न सक्छन् स्वास्थ्य नर्सिङ महिलाहरु को लागि एक खतरा हुँदा यदि anthelminthic लागूपदार्थ। एउटै परिस्थितिमा, डाक्टर एक अपेक्षाकृत सौम्य हालतमा "Piperazine" र "Pyrantel" को expectant आमा सल्लाह दिन्छन् सक्छ। तपाईं एक हप्ता को एक ब्रेक संग2पाँच दिन पाठ्यक्रम खर्च गर्न आवश्यक छ।
दबाइ बिना उपचार
Pinworms शरीर मा superficially स्थित छन्, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई को र दबाइ लिएर बिना छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
proliferation को रोकथाम र पुन: आत्म pinworms को चक्र जीवन भन्दा defecation कपास swab बीच गुदा orifice बन्द गर्न आवश्यक छ।
कमजोर सोडा समाधान शुद्ध पार्नुहुन्छ Enemas, 1 को एक मात्रा -3चश्मा परजीवी अन्डा धुन मदत। प्रभावकारी बाहिर प्रक्रिया लेट रात मा, जब कीडे गुदा को सतह मा संचित छन् बोक्न।
दारिम, लसुन, अखरोट, कद्दू बीउ, सहिजन र तोरी: कीडे धपाउने, तपाईंले यी खाद्य पदार्थ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कडाई राम्रो व्यक्तिगत स्वच्छता पालन।
दैनिक कोठा साबुन र पानी संग सफाई।
तपाईं कीडे हटाउने लोक उपचार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक helminth जीवन चक्र को अधिकतम - तपाईं 40 दिन को सिफारिसहरू पालना गर्नुपर्छ।
छोराछोरीको रोग को उपचार
बित्तिकै बच्चालाई, बालुवा, पशु, विदेशी खिलौने संग खेल्दै क्रल र संसारको बारेमा जान्न थाले रूपमा, आमा चेतावनी हुनुपर्छ र राम्ररी बच्चाहरु को स्वच्छता निगरानी, बच्चालाई यी कीडे छैन थाह छ। तलको फोटो स्पष्ट फोहोर हात मार्फत संक्रमण बाटो देखाउँछ।
छोराछोरीको वर्ष enterobiosis उपचार अधिक वयस्क क्षेत्रीय धेरै फरक छैन। helminths विरुद्ध सफल लडाई गर्न प्रमुख छ - पहिलो स्थानमा सबै एउटै सरसफाई र स्वच्छता छन्। बच्चा कम्तिमा4पटक बच्चालाई कुराहरू फलाम र फलाम को अधिकतम तापमान मा एक दिन धुन टाढा, धुन नबिर्सिनुहोला। एकै समयमा निर्धारित मा दबाइ। खातामा बच्चाहरु को उमेर र तौल लिएर डाक्टर, लागूपदार्थ सल्लाह दिन्छन् गर्न। शिशुहरू लागि मात्र सुरक्षित उपचार "Piperazine" छ। बच्चाहरु को उपचार को लागि सबै भन्दा अक्सर लागूपदार्थ प्रयोग गरिन्छ "Vermoxum", "Pyrantel", "Gelmintoks" र आफ्नो analogues। बच्चाहरु को लागि Pinworm चिकित्सा छैन शरीर मा एक धेरै मजबूत विषाक्त प्रभाव छ, तर कीडे विरुद्ध कम प्रभावकारी छ।
पहिलो दबाइ लिइरहेको को पूर्वसन्ध्या मा बालबालिकाको आहार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। खाद्य तपाईं आफ्नो बच्चाहरु सूप, सलाद र फल, दूध उत्पादन दिन भने legkousvayaemoy राम्रो छ हुनुपर्छ। यस्तो "Dyufolak" वा ग्लिसेरिन suppositories रूपमा रेचक औषधि लिन साँझ एक डाक्टर निर्धारित बिहान दबाइ गोद द्वारा। यो शरीर देखि परजीवी ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
साथै, कीडे र परजीवी आफूलाई विरुद्ध तयारी पहिले देखि नै unsettled पेट वनस्पतिहरूको पाचन को रूप मा विभिन्न जटिलताहरू sprovoirovat सक्छ उल्लङ्घन गर्छ। उदाहरण को लागि, निर्धारित probiotics यस्तो अवस्था को रोकथाम को लागि, "Symbiter", "Laktovit"।
Pinworms: घर मा उपचार
लोकप्रिय अवस्थित व्यञ्जन कीडे को उपचार स्वाद को "unloved" प्रयोग परजीवी को expulsion आधारित र Smells। घरमा pinworms देखि समय-परीक्षण व्यञ्जनहरु हो:
लसुन को Tincture। स्तूप वा भ्यागुतो लसुन एक ल्वाड़ Mash। पानी 1 उम्लिरहेको पोख्नुहोस्: 1। सुत्नेसमय लसुन tincture अघि पिउन र पानी प्रशस्त तल धुन।3लगातार दिन लाग्न, त्यसपछि एक हप्ताको लागि एक ब्रेक लिन र पाठ्यक्रम दोहोर्याउनुहोस्।
फर्सी बीउ एक मासु Grinder स्क्रोल। एक वर्दी slurry गठन गर्ने मह थप्नुहोस्। खाली पेट मा एक चमचा खान्छन्। यो नुस्खा2वर्ष देखि पनि बच्चाहरु अनुरूप हुनेछ - स्वादिष्ट र स्वस्थ!
Pinworms प्याज को गन्ध सहन छैन। प्याज को एक चौथाई RUB र नुन को एक चम्मच र चमचा संग मिश्रण वनस्पति तेल। ओछ्यानमा जानुअघि5दिनको लागि लिनुहोस्।
यो जडीबुटी tansy र wormwood को decoctions को रूप मा pinworms लागि लोक उपाय मद्दत गर्छ। तर तिनीहरूले contraindications र साइड इफेक्ट को एक नम्बर छ। व्यावसायिक सल्लाह बिना प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छैन। तर chamomile को decoction को enema छैन हानी हुनेछ - प्रक्रिया एक हप्ता को एक ब्रेक संग3लगातार दिनको लागि 2nd वर्षमा ओछ्यानमा जानुअघि पालना गर्नुहोस्।
pinworms को खोज गर्न उजुरी संग डाक्टर गर्न भ्रमणको कस छैन। आफ्नो अनियन्त्रित प्रयोग स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ त उपचार लागूपदार्थ, contraindications र साइड इफेक्ट को एक नम्बर छ।
एक काँध आत्म-कमी र चिकित्सा विधिहरू कसरी कम गर्न
को bronchi को सुनिंनु: लक्षण र उपचार
कसरी एक बिल्ली को बच्चा (2 महिना) मा पखाला उपचार गर्न? कारण, उपचार घर, दबाइहरु, आहार मा
खेल स्मृति लोप: सुँगुर लागि मिसिन: खण्डमा
अजोरमा आकर्षण: वर्णन र समीक्षा
लामो कपाल लागि दैनिक Hairstyles। एक्सप्रेस विकल्प - थाकबनाउदै।
जो पार्किंग लागि ठीक छ? चाहे र कसरी पार्किंग लागि राम्रो पुनरावेदन गर्न?
मेगाफनमा शुल्क असक्षम गर्ने? संचार सेवा
वर्षहरु सम्म इरकुत्स्क र यसको गतिशीलता को आबादी। शहरको जातीय समुदाय